मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ब्रेक थ्रू, सुरुङमार्गको काम सकियो, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ब्रेक थ्रू, सुरुङमार्गको काम सकियो
डिसी नेपाल , २७ चैत्र २०७४
खानेपानी मन्त्री बिना मगर मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रगति विवरणबारे जानकारी गराउँदै । साथमा सचिव कृष्णराज बिसी । तस्वीर : रासस
काठमाडौं। बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङमार्ग खन्ने काम सकिएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी आयोजनाको सुरुङ खन्ने काम सकिएको औपचारिक जानकारी गराएको हो। अन्तिम चरणको सिन्धु–ग्याल्थुम खण्ड ७ दशमलव ५ किलोमिटर सूरुङ बे्रक थ्रू भएसँगै आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य मंगलबारबाट सकिएको हो।
आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काम ३ खण्डमा विभाजन गरेर सुरु गरिएको थियो। आगामी बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा ब्रेक थ्र्रू कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटाले जानकारी दिए।
आयोजनाले २६ किलोमिटर लामो सुरुङ खन्ने कामलाई ऐतिहासिक उपलब्धि भनेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री विना मगरले दसंै अघि नै मेलम्चीको पानी काठमाडौंको घरघरमा उपलब्ध गराउने दावी गरिन्। उनले काठमाडौं उपत्यका भित्र मेलम्चीको पानी घरघरमा पु¥याउने गरी पाइपलाइन विस्तारको कामलाई पनि तीव्रता दिइएको बताइन्।
मन्त्री मगरले कार्यभार सम्हाले लगत्तै आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरी दसैं अघि नै मेलम्चीको पानी काठमाडौंको घरघरमा आउने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएकी थिइन्। कार्यक्रममा हालसम्म आयोजना निर्माणका लागि २४ अरव २२ करोड खर्च भएको पनि जानकारी दिइएको छ।
मेलम्चीको भविश्य अन्योलमा, सरकारले तोड्यो इटालिय कम्पनीसँगको ठेक्का